Kaontenera sakafo, kaopy saosy, boaty voankazo - XINLONG
Tongasoa eto XINLONG
Manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana sy ny famokarana fitoeran-tsakafo PP azo ampiasaina izahay.
Mifantoha amin'ny R&D ary ny famokarana boaty sakafo haingana, boaty sakafo haingana azo alefa, boaty fihinan-kanina haingana dia be ambongadiny, lakozia, kojakojam-panaka azo ampiasaina, latabatra fiarovana ny tontolo iainana, ambongadiny misy latabatra, esory ny boaty sakafo haingana.
Mirefy 8000 metatra toradroa mahery ny velarany ary misy mpiasa 50 eo ho eo. Famokarana plastika matihanina io. Manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana sy ny famokarana fitoeran-tsakafo PP azo ampiasaina izahay.
Ho an'izay mieritreritra ny orinasanay sy ny entantsika, azafady mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka aminay na mifandraisa aminay haingana. Ho fomba iray hahafantarana ny varotra sy mafy orinay. betsaka kokoa, azonao atao ny manatona ny orinasanay hahalalanao azy.
Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny fiainana. Anisan'izany ny boaty fitehirizana trano, kojakojan-dakozia, kojakoja fandraisam-bahiny, kojakoja fisakafoanana ary fonosana fitaovana hafa.
Miakatra ho any ...
Kaonty plastika avo lenta Microwavable PP ...
Amin'ny alàlan'ny ezaka tsy manam-paharoa dia manana karazana boaty fisakafoanana plastika mihoatra ny 260 isika, boaty voankazo plastika, antsy plastika, fork ary sotro misy karazany sy fika manokana.
Ho anay dia ny fanaraha-maso kalitao dia fihetsika kokoa noho ny teny filamatra.
Tombony iray amin'ny latabatra azo ampiasaina raha ampitahaina amin'ny latabatra porselana tsotra dia ny mora entina ary azo averina fenoina rehefa lany. Fanary ...
Fahasalamana sy fiarovana: ny boaty fisakafoanana plastika azo atsimo dia vita amin'ny fitaovana BPA Free ary tsy misy fofona hafahafa rehefa mafana. Maharitra sy azo ampiasaina indray: Reusabl ...
Ny trano fisakafoanana rehetra sy ny trano fisakafoanana haingana any an-tsena dia mampiasa kaopy plastika azo esorina, satria ny fampiasana kaopy plastika fanary dia mety sy hadio. Manify fotsiny ...